DHEGEYSO: Diga-rogashada siyaasadeed Somalia ku gaar maaha (Warbixin xiise badan) | Hadalsame Media
Home Wararka DHEGEYSO: Diga-rogashada siyaasadeed Somalia ku gaar maaha (Warbixin xiise badan)
DHEGEYSO: Diga-rogashada siyaasadeed Somalia ku gaar maaha (Warbixin xiise badan)
(Stockholm) 28 Juun 2018 – In ka badan kun qof oo haatan u sharraxan doorashada dayrtan ka dhacaysa dalkan sweden ayaa horay uga tirsanaa xisbiyo kale.
Xisbiga Miljöpartiet ayey ka tageen musharrixiinta ugu badan, halka xisbiga dhexe ee Center-ku uu helay tirada uu badan.
Yuusuf Cabdillaahi wuxuu ku nool yahay magaalada Tröllhättan, wuxuu horay uga tirsanaan jirey xisbiga Vänster Partiet, isagoo haatan doorashada soo fool leh ee golaha degaanka u taagan xisbiga Centerpartiet, haddaba maxaa keenay isbeddelka aragtiyeed ee ku dhacay Yuusuf?
Waxaa sanadihii dambe isbeddel ku dhacayay aragtida ay ku dhisan yihiin axsaabta kala geddisan, taasoo ka dhigan inay dhacayso is dheeh dhanka aragtida ah.
Waxaa isna dadka diga rogtey ka mid ah Kaahin Axmed oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo 13 sano siyaasadda Sweden ku jiray. Kaahin Axmed wuxuu u shaarraxan yahay xisbiga Centerpartiet, isagoona ka baxay xisbiga Moderaterna, balse Kaahin wuxuu aaminsan yahay in wareegistiisa loo sababayn karo aragtiyihii axsaabta oo isku milamay.
Dhanka kale qowmiyadda soomaalida eek u dhaqan Sweden, gaar ahaan kuwa ka qayb qaata hannaanka doorasho ee u kala codeeya axsaabta kala gedisan ee dalkan, laftoodu waa ku kala aragti duwan yihiin arrinta la xiriirta daacadnimada hal xisbi.
Tusaale ahaan, Cabdi Casiis Sheekh Abuukar oo ku dhaqan xaafadda Tensta ee magaalada Stockholm, muddana dalkan joogey wuxuu had iyo goor u codeeyaa Xisbiga shaqaalaha ee Socialdemokraterna.
’’Anigu had iyo goor waxaan u codeeyaa xisbiga S’’.
Cabdi Casiis Sheekh Abuukar
Waxaanse ra’yigaa aan la qabin Cabdi Rashiid Ahmed Ismaaciil oo deggan xaafadda Rinkeby ee isla magaalada Stockholm, oo isagu xeeladaysta marka uu xulanayo xisbigii uu u codayn lahaa.
’’Anigu waxaan akhriyaa ajendaha siyaasadeed ee xisbi kasta’’.
Cabdi Rashiid Ahmed Ismaaciil
Waxaa jeedinaya: Maxamed Xaaji
Previous article”Milan sidan ma mudna!” – Guddoonka Olombikada oo niyad jab ka muujiyay UEFA!
Next articleTOOS u daawo: Senegal vs Colombia, Japan vs Poland – LIVE (Shaxda Sugan)